LG G6 nọdebere LG G5 iji gosi ndịiche | Gam akporosis
LG achọghị ịhapụ puppet isi na-enweghị isi otutu ihe a y ntapu nke na-apụta metụtara ọkọlọtọ ya na-abịanụ nke a ga-ewepụta na February 26, kpọmkwem na ụbọchị 4, na Mobile World Congress 2017.
Ihe ngebichi ga-abụ ndị isi na-aga n'ihu n'ihu nke ekwentị kachasị mma nke afọ na LG G6. a na-etinye ya na LG G5, na-egosi ya n'akụkụ ya niile. Ọ bụrụ na G5 jiri bezels "gbara ọkpụrụkpụ", ugbu a naanị ha na-ebi oke pasent nke ohere niile na ihuenyo ahụ.
Enwere ike ịhụ nke a n'ụzọ zuru oke na filtration nyere ugbu a na nke na-etinye anyị n'ihu LG G6, ọkọlọtọ dị nso nke onye nrụpụta Korea nke nwere olile anya ịlaghachi na ika ahụ gaa na saịtị ahụ o lekọtara site na LG G2; nnukwu ọnụ ahịa ahụ nke kụrụ aka maka obodo gam akporo.
E bipụtara onyonyo a na Weibo, ma gosipụta ihe flagship na-esote mbipụta ya gara aga. Ihe ọzọ kachasị na LG G6 bụ ruru gị na ihuenyo nke ahụ agbanweela na 18: 9, nke ewepụtara maka pụrụ iche maka ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya, ọkachasị maka usoro TV ndị ahụ sitere na Netflix nke a na-edekọ na usoro ahụ
Mkpebi ihuenyo ahụ na-abawanye na a Quad HD ochie mbipute, 1.400 x 2.880. Ọzọ nke ya peculiarities na nwere na-eme na ihuenyo, bụ mechie nkuku na a na-ahụ nke ọma dị ka ọbụna okpokolo agba bụ ndị ọzọ curved.
Ya mere, anyị nwere ike ichere ịhụ ekwentị a n'aka LG n'onwe ya, nke ga-eme ga-achọ iweta ya onye ọ bụla si na ogbo na Mobile World Congress 2017. Nnukwu atụmanya nke na-ebuli elu site na ịhapụ Samsung ohere niile ka nke a mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG G6 tinyere n'akụkụ LG G5 na onyonyo ọhụrụ a
Ọhụrụ Amazon Fire TV, ugbu a na-ere ere na UK, Germany na Japan